Multilingual COVID-19 Ozi vidiyo - AfricaArXiv
Enwere otutu ihe omuma banyere COVID-19 - ufodu kwesiri ntukwasi obi karia ndi ozo. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụ nrụgide idozi ozi dịgasị iche iche - ọtụtụ mgbe n'asụsụ na-abụghị asụsụ ha.
Anyị na-adụ ọdụ ilebara nke a anya na ozi dị mkpirikpi, nke na-agbanwe agbanwe n'ọtụtụ asụsụ / mpaghara mpaghara o kwere mee. Maka nke ahụ, anyị chọrọ enyemaka nke ndị ọrụ nyocha na ndị ọzọ na-enye nkwukọrịta.
Ebumnuche anyị mepụta vidiyo nkeji 2 n'ọtụtụ asụsụ dị ka o kwere mee na-ewetara ozi na-agbanwe agbanwe gbasara COVID-19, atụmatụ njide na ozi ahụike bara uru.
Nkewa [South Africa]
Achọrọ m ịgba ụmụ amaala ọ bụla ume ka ha mee ụdị vidiyo CVID 19 na vidiyo mmụta ma ọ bụ olu na-edekọ ozi iji nyere ndị ha aka na ọrịa ọjọọ. Ekele Jonathan Sena na ndị enyi maka ebumnuche a iji gwa ndị Maasai.
Ihe site IPACC - Ndi Indigenous People of Africa Kọmitii Na - ahụ Maka Ihe Nlekọta na Fraịdee, Eprel 24, 2020
lingala [DR Congo]
Egwuregwu egwu egwu. Gbagyi, Yoruba, igbo, Efik, Urhobo, Hausa & Ogbi [Naịjirịa]
Oké ifufea [Kenya]
Lee isi okwu ndị dị n’okpuru
Tugharia ha na asusu obodo gi
Tinye ozi ekele, nkwupụta dị mma, mmesi obi ike na omume mmadụ nwere ike ime ihe ọ bụla
Mee onwe gi ka iwere ozi a. Chọsie ike ruo nkeji 3 (nha faịlụ> 600MB)
Kanye vidiyo a n'ụzọ na-esonụ: COVID_Imalite_LANGUAGE_COUNTRY_dd-mm-2020
Bulite vidiyo gị na YouTube ma dejupụta fọm Google a: https://tinyurl.com/COVID19-video-submission.
N'iji ozi sitere na Google Google, anyi gha edozi ndepụta nke vidiyo na etiti na websaịtị 2 https://access2perspectives.com/covid-19.
Anyị ga –ebupụ vidiyo ọhụrụ, wepụta ihe Access2Persepectives YouTube ọwa ma soro na Facebook. Anyị ga-abanye ebe ngbasa ozi na webụsaịtị Access2Perspectives.
Twitter: Zipụ vidio gị gaa na ndị enyi na ezinụlọ, tweet banyere ya, kesaa ya na ndị nhazi obodo (ụka, ụlọ akwụkwọ, netwọkụ mmekọrịta). Biko kpado anyị na @AfricArXiv ma were hashtag # COVID19video
Nsogbu ọ bụla, ajụjụ ma ọ bụ nchegbu, email: info@access2perspectives.com
Anyi choro ka anyi hu na a na-eketa vidio a di iche iche ka enwere ike. Anyị anaghị egbochi mmachi megide vidio vidio a. Iji hụ na omume dị mma anyị na-atụ aro ka ndị nwekọrịta klọọkụ na-achịkwa ikike ihe jikọrọ ha.https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
Kwaa onwe gị - ebee ka ị si bịa, gịnị ka ị na-eme?
Ndewo, aha m bụ… site (obodo, obodo)
Coronaviruses bụ otu nje virus metụtara ya na-akpata ọrịa akụkụ iku ume na mmadụ.
Imirikiti ọrịa nke coronaviruses kpatara dị nwayọọ mana ha nwere ike ịka njọ.
N’oge na-adịbeghị anya, a chọpụtara ọrịa ọhụrụ nke otu ọrịa coronavirus, COVID-19, ma gbasaa ngwa ngwa n’ụwa niile.
COVID-19 bu oria ohuru nke SARS-CoV-2 coronavirus kpatara.
Ebu ụzọ mata ya na ndị ọrịa na mbubreyo 2019 na Wuhan, ógbè Hubei nke dị na etiti China.
Indị Coronavirus a na - ebufe n'ụzọ dị mfe n'etiti ụmụ mmadụ ma gbasaa ngwa ngwa kemgbe.
A kọwo COVID-19 n'ime mba 150 n'ụwa niile na China, Italy, US, Spain na Germany emetụtara n'ụzọ dị njọ.
Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) kwupụtara ọrịa roronavirus nke afọ 2019-20 na etiti Machị 2020.
Kedu ihe mgbaàmà ahụ?
Mgbaàmà ndị a na-ahụkarị na COVID-19 bụ ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ, na ụkwara akọrọ.
Ọrịa na-adịkarị nwayọ ma bido nwayọ, na-adịgide ruo izu abụọ.
Ọtụtụ mmadụ na-agbake n’ọrịa ahụ n’achọghị ọgwụgwọ pụrụ iche.
Ihe mgbaàmà siri ike nke ọrịa ahụ gụnyere nsogbu iku ume, obi na-ekweghị akwụsị akwụsị, ọgba aghara na egbugbere ọnụ na-adịghị mma ma ọ bụ ihu.
Groupsfọdụ ndị mmadụ nọ n'ihe ize ndụ nke ọrịa siri ike, gụnyere, ndị agadi, na ndị nwere ọrịa ahụike dịlarị gụnyere ọbara mgbali elu, nsogbu obi ma ọ bụ ọrịa shuga.
Only nwere ike ibunye ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-egosipụta ihe mgbaàmà nke coronavirus?
Somefọdụ ndị mmadụ nwere naanị ihe na-egosi obere nrịanrịa nwere ike ọ gaghị ewere onwe ha ọrịa.
Agbanyeghị, ndị mmadụ malitere ọrịa ahụ na ọrịa nwere obere ahụ achọpụtala na ha nwere ọnụọgụ dị elu nke nje ahụ ma nwee ike ibunye ndị ọzọ.
Ozugbo akara ngosi pụta, ọ dị mkpa ibido belata kọntaktị na-elekọta mmadụ na 'kewapụ onwe ya' iji belata ihe ize ndụ nke ịgbasa nje n'ihu.
Ihe akaebe na-egosi na ọrịa dị nro, nke nwere akara ole na ole, bụ ihe a na-ahụkarị na ụmụaka. A kọwokwa ọrịa nke ndị okenye na-ekesa COVID-19 na-enweghị ihe ngosi ọ bụla nke ọrịa ahụ, ọ bụ ezie na amachaghị otú nke a si eme.
Kedu ihe ị ga - eme iji chekwaa?
Iji chebe onwe gị, ọ dị mkpa iji ncha na mmiri sachaa aka gị mgbe niile, ọkachasị mgbe ọ bụla ị pụtara n’ihu ọha.
A nwekwara ike iji gham mmanya mee ihe dịka ihe ọzọ.
Ọ dịkwa mkpa iji zere imetụ anya gị, imi, na ọnụ gị aka na-akwọghị akwọ.
Ọ bụrụ na COVID-19 na-agbasa n'ime obodo gị, ọ dịkwa mkpa itinye ụfọdụ etiti n'etiti gị na ndị otu ndị ọzọ.
Debe ndị ọzọ ka ọ bụrụ na ị nwere oria
Mgbe ibata nje ahụ na nje ya, ihe mgbaàmà nwere ike apụta ruo ụbọchị 14 ka emesịrị.
Ọ bụrụ n ’ị chere na ị ga - ekpughepu nye onye nwere ọrịa ahụ ma ọ bụ ịmalite ịmalite ihe mgbaàmà, ọ dị mkpa ka‘ ịpụ onwe gị iche ’ruo ụbọchị 14 iji zere ibunye nje ahụ.
Nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ na ezinụlọ ọzọ na-arịa ọrịa.
Jụọ ndị ezinụlọ, ndị enyi gị ma ọ bụ ndị agbata obi gị ma ha nwee ike iwepụ nri maka gị ma zere ụgbọ njem ọha.
Ikwesiri ịhapụ ụlọ ahụ, ịkwesịrị iyi uwe, wee gbaa mbọ kpuchie ọnụ na imi gị site na anụ ahụ mgbe ịkwara ụkwara ma ọ bụ ịmị afọ.
N'ọtụtụ mpaghara nje oria ahụ metụtara, a chọrọ 'ịnọpụ na-elekọta mmadụ' iji gbochie ịgbasa nje ahụ.
Gini bu na uche mmadu?
Na mpaghara ndị nsogbu emetụtara, a na-arịọ ndị mmadụ ka ha mejupụta usoro 'ngbanye mmekọrịta'.
Nke a gụnyere iwelata ọnụ ọgụgụ ndị ana - akpọtụrụ ndị mmadụ ụbọchị niile iji belata ọnụọgụ mgbasa.
A na-agba ọtụtụ ndị ume ka ha si n'ụlọ na-arụ ọrụ ma zere ụgbọ njem ọha ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
A na-enwe nkụda mmụọ na ndị enyi na ezinụlọ (gụnyere agbamakwụkwọ na oriri agbamakwụkwọ).
A na-agwa ndị mmadụ chere na ha nwere ọrịa siri ike ịgbaso iwu ndị siri ike karịa ndị ọzọ so n'obodo.
Ọ dị mkpa n’oge a iche maka ndị na - enweghị nsogbu n’obodo ma lebe anya maka ọgụgụ isi mmadụ niile.
Ogbe obodo ewulitela otu kọntaktị, nke pụtara na ndị mmadụ nwere ike ịrịọ ndị agbata obi ha maka enyemaka ma achọọ ya.
Ọ bụrụ na achọrọ ka ị nọrọ n'ụlọ, ọ dị mkpa ka ị na-emega ahụ, na-eri ahụ ike ma na-emega ahụ.
Ọtụtụ ezinụlọ na ndị enyi na-akpọtụrụ iji teknụzụ dịpụrụ adịpụ dị ka ekwentị, ịntanetị, na mgbasa ozi mmekọrịta.
Gịnị kpatara gọọmentị na-eji etinye ndọpụ echiche mmadụ na njikwa njem?
Ezubere iwu ndị a iji belata ọnụọgụ mmekọrịta ndị mmadụ nwere, na-eme ka o sikwuoro nje a ịgbasa na obodo.
Site n'ime nke a, a na-atụ anya na ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ahụike na mpaghara ndị emetụtaghị agaghị ebu oke ibu, ma nwee ike ịnye ọgwụgwọ maka oge niile enwere ike.
Ya mere ọtụtụ gọọmentị na-amachibido nnọkọ oriri buru ibu, dị ka egwu egwu na ihe omume egwuregwu.
A nwekwara ike ịgwa ebe ndị ọzọ na-adọta ìgwè mmadụ, dịka ụlọ ahịa na-adịghị mkpa, gyms na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ.
Ulo akwukwo na akwukwo di iche iche nwere ike imechi.
Ọtụtụ mba na-amachibido njem njem, na-amachi onye nwere ike ịbanye ma hapụ mba ahụ.
Ebe a na-ekwu maka ịchọta ụkpụrụ ntụpọ obodo
Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya na ọnwa ndị na-abịa?
Nke a bụ ọrịa ọhụụ, nke anyị ka nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụ.
Agbanyeghị na ụfọdụ mba, mgbasa ọrịa ka ọ na-ebelata, n'ọtụtụ mba ndị ọzọ, anyị na-ahụ ihe dị iche.
Ọ bụ ọnọdụ na-agbanwe agbanwe ọsọ ọsọ, yana ọ dị mkpa ka ndị mmadụ debe ọhụụ site na nduzi nke gọọmentị ha.
Isi mmalite nke ozi
Ihe ndi WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
AfricaArXiv COVID-19 Ajụjụ A na mpaghara asụsụ ndị Africa: https://info.africarxiv.org/qa-around-covid-19-in-regional-african-languages/
Ana McNaughton, Mahadum nke Oxford, ORCID iD: 0000-0002-7436-8727, Twitter: @AnnaLMcNaughton
Louise Bezuidenhout, Mahadum nke Oxford, ORCID iD: 0000-0003-4328-3963, Twitter: @loubezuidenhout
Johanna Hamann, Access2Ppectpectives, ORCID iD: 0000-0002-6157-1494, Twitter: @johave
Ederede a na vidiyo niile dị n'okpuru Ikike CC-BY-SA 4.0
Kpoo dika: Bezuidenhout, Louise, McNaughton, Anna, & Havemann, Johanna. (2020, Machị 26). Multilingual COVID-19 Ozi vidiyo. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.3727534